होस गर्नुहोस् दशैंमा मापसे चेकिङ र छड्के हुन्छ है ! - Onlinenews7
होस गर्नुहोस् दशैंमा मापसे चेकिङ र छड्के हुन्छ है !
व्यानर २ अशोज २६, २०७७
काठमाडौं– कोरोना महामारीका कारण मापसे चेकिङमा खुकुलो बनाएको ट्राफिक प्रहरीले दशैंमा कडाई गर्ने भएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथले दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजनामा यस्तो ल्याएको हो । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी परिचालन, दुरुस्त कारबाही, शीघ्र र सहज सेवा पहुँचको व्यवस्था मिलाएर चाडपर्वलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यका सुरक्षा योजना लागू गरिएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) भिमप्रसाद ढकालले बताए ।
लामो दुरीका भाडाका सवारीसाधनमा २ जना चालक अनिवार्य रुपमा भएरनभएको प्रविधिबाट निगरानी गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यसका लागि ट्राफिक कम्युनिकेशन एपलाई प्रयोगमा ल्याइने ढकालले बताए ।
Previous Postनेपाल प्रहरीका आईजी थापा क्षत्रीको ‘मधुमास’
Next Post५० करोड किर्ते काण्ड : केबलप्रताप राणालाई सीआईबीले समात्यो